1. Waa maxay faa'iidooyinkaaga ku jira galaaska makiinadda?
Faa'iidooyinka Machining CNC:
Iyada oo la adeegsanayo galaaska CNC waxaan soo saari karnaa ku dhawaad ​​qaab kasta oo la malayn karo. Waxaan u adeegsan karnaa faylashaada CAD ama nashqadeynta si aan u abuurno dariiqyada aaladda mashiinka.
Mashiinnadayada CNC waxaa loo adeegsadaa hal shay oo maanka ku haya, oo soo saaraya alaab dhalo oo tayo leh. Waxay si joogto ah u haystaan ​​dulqaadyo adag malaayiin qaybood waxayna helaan dayactir joogto ah si loo hubiyo in waxqabadkoodu uusan marna hoos u dhicin.
Mashiinnadayada waxaa loogu talagalay inay yareeyaan waqtiyada dejinta iyo beddelka loo baahan yahay si loo farsameeyo qaybo badan oo kala duwan. Waxaan sidoo kale horumarinnaa qalab si isku mar loo farsameeyo qaybo badan oo mashiinnada qaarkood ay shaqeeyaan saacad walba. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ku tiirsanaan karto ZHHIMG si aad si joogto ah u samayso waqtiyada dhalmada iyo xitaa dedejinta howsha.
2. Sideen u go'aamiyaa nooca geesku ugu fiican yahay badeecada galaaskayga?
Kooxda Wax-soosaarka Caqliga leh ee ZHongHui (ZHHIMG) Kooxda quraaradu waxay ka kooban yihiin dhowr injineero ka samaysan galaaska guriga dhexdiisa ah oo had iyo jeer diyaar u ah inay ka caawiyaan macaamiisha xulashada habka saxitaanka dhalada ee saxda ah ee alaabadooda. Qodobka lagama maarmaanka u ah hannaankan ayaa ah in laga caawiyo macmiilka inuu ka fogaado wixii kharash ah ee aan loo baahnayn.
Qalabkeennu wuxuu u qaabayn karaa geeska galaaska astaan ​​kasta. Astaamaha caadiga ah waxaa ka mid ah:
■ Jarid - Gees fiiqan ayaa la abuuraa marka galaas la dhaliyo oo la neefsado.
Se Badbaadada Badbaadada - Geeska bad -mareenka ah ayaa ah qol yar oo ka nabdoon in la maareeyo oo aan u badnayn inuu jabo.
Cil Qalin-Qalin, oo sidoo kale loo yaqaan "C-qaab", waa astaan ​​gacan.
■ Tallaabo - Tallaabo ayaa lagu qodbi karaa dusha sare iyadoo la abuurayo dibno si loogu dhajiyo galaaska gurigaaga.
Corn Geesta Loogu Magac Daray - Geesaha ka samaysan muraayadda waxoogaa waa la simay si loo yareeyo afayga iyo dhaawaca.
Round Dhulka Flat - Dhinacyadu waa fidsan yihiin oo geesaha geesahooduna waa fiiqan yihiin.
Lat Flat with Arris - Cidhifyadu waa fidsan yihiin dhulkana waxaa lagu daraa jajabyo iftiin leh gees kasta.
Ve Beveled - Dhinacyo dheeraad ah ayaa laga yaabaa in lagu dhajiyo dhalada siinta gabal wajiyo dheeraad ah. Xagasha iyo cabbirka bevel -ku waxay kuxirantahay faahfaahintaada.
File Macluumaadka Isku-Darka ah-Mashaariicda qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan isku-darka farsamooyinka isku-darka ah (Marka uu sameeyaha dhalada ahi marka hore ka jaro gabal galaas xaashida dhalada ah, qaybta soo baxdaa waxay had iyo jeer yeelan doontaa cidhifyo, fiiqan oo aan ammaan ahayn. cidhifyadan googo'an ceeriin ah si ay uga dhigaan kuwo nabdoon oo ay wax ka qabtaan, yareeyaan jajabka, hagaajiyaan hufnaanta dhismaha iyo kor u qaadista muuqaalka.); la xiriir xubin ka mid ah kooxda galaaska ZHHIMG si aad u hesho caawimaad.
Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite Cube, Sax Granite dusha sare, La taaban karo Epoxy, Sax Granite, Qalinka Granit Square Ruler,